Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Oo Balanti Ka baxay | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Wararka Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Oo Balanti Ka...
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Oo Balanti Ka baxay
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo xalay khudbad ka jeediyay munaasabada xiritaanka shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa shaaca ka qaaday in uu dib ugu soo noqday shaqada maamulka.
Xaaf oo horey u shaaciyay in Wasaarada arimaha gudaha Soomaaliya u wakiishay howlaha Galmudug ayaa hada mar kale ka laabtay go’aankaasi, waxa uuna cadeeyay in hada kadib Wasaarada aysan kaligeyd shaqada qaban doonin ayna wadaagi doonaan.
Waxa uu sheegay Madaxweyne Xaaf in hada waxii ka dambeeya uusan marti ka noqon doonin howlaha shaqo ee Galmudug, waxa uuna xusay in Wasaarada arimaha gudaha aysan howsha kaligeed hada kadib ku noqon doonin.
”Hada kadib marti ugama noqoneyno Wasaarada arimaha gudaha howlaha maamul, waa in wadajir loo sameeyaa guddiga farsamada ee maamul u sameynta,waxaan kaloo ku talin in Xildhibaanada la xulaya aysan noqon kuwa Xamar laga keeno oo maalintii la rabo loo yeero” ayuu yiri Xaaf.
Madaxweynaha Galmudug ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in Wasaarada arimaha gudaha kala shaqeeyaan magacaabista guddiga farsamada iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka.
“Wixii hadda ka dambeeya waxaa rabnaa anagoo Galmudug ah iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha inaan wada socono rabnaa, Guddiga la sameynayo inaan ku ogaano oo aan ka wada shaqeyno, ma rabno in aad keligiin noqotaan, ma yeeleyno, odayaasha waa isu keenteen waa mahadsan tihiin, laakiin Xildhibaanada iyo wixii kale ee la keenayo waa wada ogaaneynaa” ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.